ပရိသတ်တွေ စိတ်မပူရအောင် လူမှုကွန်ယက်တွင် ခဏပျောက်နေရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို သေချာရှင်းပြလိုက်တဲ့ ရှိုင်း - Myanmarload
ပရိသတ်တွေ စိတ်မပူရအောင် လူမှုကွန်ယက်တွင် ခဏပျောက်နေရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို သေချာရှင်းပြလိုက်တဲ့ ရှိုင်း
လွန်ခဲ့သော ၁၄ နေ့ က 11:40 April 06, 2021
အဆိုတော် ရှိုင်းကတော့ ရခိုင်လူမျိုး ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ မွေးရပ်မြေအတွက် လိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကို အမြဲကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူ တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ တိမ်ညိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းက မီးဘေးသင့်ခံခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူများအတွက်လည်း ကောက်ခံရရှိထားတဲ့ စုပေါင်းအလှူငွေများအား သွားရောက်လှူဒါန်းပေးခဲ့တာကိုလည်း ကြည်နူးဖွယ် မြင်တွေ့ခဲ့ကြရမှာပါ။
Photo Crd-Shine’s Facebook Page
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်း ရှေ့ဆုံးကနေ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးပါ။ အရေးကြုံတဲ့ အခါတိုင်း ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တစ်သွေးတည်း တစ်သားတည်း ရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့ ရှိုင်းကို အားလုံးက ချီးကျူးဂုဏ်ယူနေကြတာပါ။ သူ့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို အမြဲတင်ပေးလေ့ရှိသော်လည်း လတ်တလောတွင် ဘာအကြောင်းမှ ဝေမျှခြင်းမရှိတာကြောင့် ပရိသတ်တွေက စိုးရိမ်နေကြတာပါ။
သူ့ကို စိတ်ပူပေးနေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် မနေ့ညက ရှိုင်းရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် လတ်တလောပျောက်ကွယ်နေရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှင်းပြလာတာပါ။ " ကျွန်တော် ရှိပါတယ် . . . ဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူး . . .
ပျောက်သွားတာလည်း မဟုတ်သလို . . . ဘာမှဆက်မ run ဖြစ်တော့တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး . . .
တစ်ချို့လုပ်စရာလေးတွေက public နဲ့လုပ်ပြမှ အဆင်ပြေသလို . . . တစ်ချို့လုပ်စရာတွေက public နဲ့ အဆင်မပြေလို့သာ ခဏပျောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ် . . .
ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲလုပ်လုပ် အရေးတော်ပုံအောင်မြင်ဖို့သာ အဓိကမို့ ကျွန်တော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့် " PERFECTOR " တွေစိတ်မပူကြဖို့ပဲ မှာထားလိုပါတယ် . . .
Emergency တစ်ခုခုဆို ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတဲ့ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေတွေကဆီက သတင်းကြားရပါလိမ့်မယ် . . .
အရေးတော်ပုံအတွက် ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်လျက်ပါ . . .
အာဏာရှင်မှန်သမျှ မုချကျရှုံးစေရမည် . . .
အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် . . .
#SaveMyammar" ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီသတင်းကို တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။